"Oday Cabdi Haybe Wuxuu Yidhi 'Fadal Hala Ixtiraamo' Hadalkiisu Ma Hiil Taliyaa Mise Waa Hiil Sammane?!!"..Muniir Axmed Cigaal
Friday January 25, 2019 - 02:37:00 in Wararka by Super Admin
Oslo (Xogreebnews)-SiyaasiMuniir Axmed Cigaal oo ka mid ah xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI ayaa ka dareen celiyey hadal uu warbaahinta siiyey Siyaasi Cabdi Haybe oo hore xilal uga soo qabtay xukuumadihii hore ee Somaliland wakhtiganna ka tirsan xisbiga WADDANI kaasi oo difaacay eedo muddooyinkii dambe loo soo jeedinayay Booliska Somaliland
Waar Adeer aynu wax hagaajisano oo Booliskeena siduu yahay ka sii qurxino oo Saxiibka Dadweynaha ka dhigno ma qadafbaa? Maya maha walal Kii u arkaa waa yeelkii: Anigoo Ixtiraamaya waxaan Saxaafadda ku arkaayay Oday Cabdi Haybe oo leh "Taliye Fadal ha la daayo ". Oday Cabdi Haybe Waan garanwaayay sababta uu sidaa u leeyahay, Fadal Guri uu leeyahay ma jooge xil Qaran ayuu hayaa, in la faleeyo lagu dhaliilo wixii ka qaloocdana waa daw iyo gar . Hiilka Cabdi Haybe waxaan garan waayay waa mid halkee ah . Ma mid Boolis difaac ahba? ma mid Taliye Fadal ahba mise waa mid Samane Difaac ah ? Aniga ka iigu xiga hadduu wax qaribo qofka ugu horeeeya ee ku qaylinaaya ayaan ahay . Wasiirkaygii Axmed Faarax ayaan ugu qayla badnaaba waayo Kala aragti ayaanu ahayn … Anigu ta Oday Cabdi Haybe mid ka duwan ayaan qabaa oo ah .